SIDA LOO ABUURO LOONA DARYEELO MIDABKA JILIBKA AMA MURQAHA - DHUXUL
Ugu Weyn Ee Dhuxul
Sida loo abuuro iyo daryeelka ee basasha Viper
Muscari (Eubotrys, Botryanthus) - warshad geedka dilaaga ah, oo loo yaqaan "basal elektar" iyo "jinka jilicsan". Xaaladaha dabiiciga ah, waxay ku koraan xayawaanada buuraha iyo keynta ee Crimea iyo Caucasus, gobolka Mediterranean, koonfurta iyo bartamaha Yurub, iyo Aasiyada Yar. Warshadu waxay noqotay mid aad u caan ah sababtoo ah muddooyinka ubaxyada hore ee muruqyada, marka la barbardhigo ubaxyada kale ee guga. Sababtan awgeed, ubaxyada jajabka ee jajabku waa mawduucaan ugaarsi ah oo si weyn u gooyay boogaha ugu horreeya.
Ubax Muscari, jilicsan iyo waqti isku mid ah aad u carafsan, waxaa loo isticmaalaa sida warshad beerta ee cawska iyo qurxinta beerta.
Ilaa dhowaantii, ubaxa muscari waxaa loo aanaynayaa qoyska liliaceae (Rinkebyada), ka dibna geedka waxaa lagu qeexay asparagus (asparagus).
Ma taqaanaa? Warshadda waxaa waajib ku ah inay magaceeda u soo dirto beerta Ingiriisiga ee Britishka ah, Scotsman Philip Miller, oo go'aansaday in geedka uu leeyahay urka miskaha. Ubaxa waxaa loo yaqaan "Viper" ama "snake" basasha maxaa yeelay guga ubaxyada ubaxyada dadku waxay ogaadeen tirade badan ee jilayaasha, sababtoo ah waxaa si qalad ah u maleeyay in abeesadu ay ku quudiyaan caleemaha muuska. Xaqiiqdii, masaska ayaa kaliya u kici kari weyn oo qorraxda qorraxda ku jirta, iyo muscari wuxuu ku koraa xaalad dabiici ah oo ku yaal meelo bannaan oo iftiin leh. Dhirta "jiir" ama "canab" jaceyl ayaa loo nicknamed la midabtey oo la mid ah ubax this, size yar iyo inflorescence foomka of farabadan of canab.
Muscari waxay leedahay nalal ukumo ah, oo ku daboolan dibadda miisaanka. Caleemaha waa muddo dheer, ilaa 6 gogo ', badiyaa guga guga, laakiin mararka qaarkood dib u dhac ka dib xagaaga. Ubax Muscari waxaa lagu ururiyaa inflorescences ilaa 8 cm dheer, miro waa sanduuq, miraha midab madow, yar yar iyo leysku duubo.
Warshadu waxay leedahay noocyo badan, ku dhawaad ​​dhammaantood waa kuwo aan qabyo ahayn oo leh tayada qurxinta, laakiin inta badan waxay u koraan sidii geed beerta. Muscari Armenian, ama Colchis - waa baraf ugu adkaysta, ubaxa u muuqda guga goor dambe, muddada ubax waa saddex toddobaad.
Ma taqaanaa? Muscari wuxuu la xiriiraa dhirta ornamental, laakiin qaar ka mid ah noocyada kala duwan waxay leeyihiin codsi wax ku ool ah: laga bilaabo muscari waxay soo saaraan emulsions horumarinta sawirrada, walxo badan oo lagu daray sheyga shaambada timaha iyo cabitaanada qaar, marka lagu daro, waxaa loo isticmaalaa daawada iyada oo qayb ka ah daawooyinka duriinka iyo dardargelinta iyo xataa warshadaha macdanta.
Doorashada Muscari Place
Kobcinista musqulaha ee beerta kuma jirto wax badan oo ku adag in la doorto meel. Warshadu waxay ku taallaa xitaa geedaha beerta, sababtoo ah basasha xayawaanka ayaa ubaxsan xilliga guga, marka caleemaha aan weli la qurxin, sidaas darteed hooskoodu waa yar yahay. Dhinaca kale, Muscari, sida ubaxa gu'ga ee kale, waxay u baahan tahay midab badan oo cadceed ah, sidaa darteed warshadani ma aha in lagu beeray hoosta iyo kuwa kale ee loo yaqaan "evergreens". Intaa waxaa dheer, muscari waa in laga ilaaliyaa gustsada adag ee dabaysha. Muscari si toos ah ayaa loogu beeray cawska, guga wuxuu si weyn u cusbooneysiinayaa muuqaalka cawska. Si kastaba ha ahaatee, kiiskan waa suurtagal in la gooyo cawska ilaa caleemaha muruqyada ay gebi ahaanba dhintaan, haddii kale nalalka dhirta marka hore waxay noqdaan kuwo gacmeed iyo markaa si buuxda u joojiyaan qaabeynta. Marka aad dooranayso goob lagu beerayo, waxaa fiican inaad u qoondeeysid qulqulka dhirta u oggolaanaya in lagu beeray tuulo, oo leh ubax qoyan taasi waxay abuurtaa meel aad u qurux badan oo dhalaalaya oo ka soo jeeda asalka cawska cagaaran.
Waa muhiim! Iyadoo dhan unpretentiousness iyo ubax guulaha, xitaa in meelo yar oo hadhuudh ah, muscari ma u dulqaadan ciidda overmoistened, sidaas darteed mudnaanta waa in la siiyaa qaybo sare ee beerta.
Muscari - dhirta dilka ah. Si aan shil ugu dhicin nalalka, ha ku beerin agagaarka meelaha loogu talagalay beeritaanka sanadlaha ah ee ubaxyada kale. Saaxiibbo wanaagsan oo loogu talagalay muscari waa daffodils, isku-dhafka, raaxada, tulubyada iyo ubaxyo guluubo kale.
Muscari si fiican ayuu u koraa on carrada bacrimiya iyo dabacsan oo leh suulasho wanaagsan oo biyo ah.
Guud ahaan, dhirtaas ma dalbanayaan dalab sare oo ku saabsan hannaanka ciidda waxayna dareemi karaan meel kasta oo raaxo leh. Si kastaba ha noqotee, ubaxa ugu firfircoon, dheer ee ubaxa iyo ubaxa quruxda badan ee muscari waxaa lagu gaari karaa iyadoo lagu beeri karo ciidda iftiinka ama dhexdhexaad ah oo leh heerka pH 5.8 ilaa 6.5. Waxaa lagu talinayaa in lagu quudiyo ciidda ka hor beerashada Bacriminta dabiiciga ah - tusaale ahaan, humus ama compost. Hubi oo ku habboon carrada Muscari - ballanqaad ma aha oo kaliya oo dheer ubaxyo, laakiin sidoo kale samaynta nalalka waaweyn.
Wax walba oo ku saabsan beerashada transplanting iyo naasaha taranta
Muscari waxaa lagu abuuri karaa laba siyaabood - abuur iyo daaqsi. Iyadoo la tixgelinayo in gabadhu ay nuugaan foomamka dhirta oo tiro badan, qaabka labaad ee dhalmada ee muruqyada waxaa loo isticmaalaa wax badan oo badan.
Mararka qaar muscari waa la koray iyada oo beerto geedo lagu iibsaday xannaanada. Horeyba waxay u jajabisaa roogagga khafiifka ah ee lagu iibiyo dheriyada dhexda guga isla markaaba isla markiiba waa loo wareejiyaa dhul furan.
Koritaanka Muskari Seeds
Noocyada ugu badan ee basasha xayawaanka ah si fudud ayaa u kicin kara is-goosashada, taas oo xaaladaha beerta ay tahay faa'idada halkii ay ka ahayd sharaf ka mid ah warshad, tanina waxay horseedaysaa kobaca aan la xakameyn ee geedaha yar yar. Si looga fogaado dhibaatadan isla markiiba ka dib markii ubax ku yaal Muscari, caws ubaxa waa in la gooyaa. Si aad u dhalisid abuurka muskari si aad uga baxdo ilaa da'da buuxda, waxaad u baahan tahay sida saxda ah ee sanduuqyo badan inta aad u baahan tahay isticmaalka dambe.
Abuurka Muscari waa in lagu beeraa isla markiiba ka dib ururinta, isla xilliga dayrta, sanadka soo socda, sida caadiga ah, waxay luminayaan biqilka. Geedka soo socda waa 1-2 cm Guga soo socda, miraha way soo baxaan qaabka dhirta yaryar, laakiin sameynta guluubtu waxay socotaa waqti dheer, sidaas darteed muskari beeraha laga bilaabo abuurka ayaa bilaabmaa in la barbardhigo bilowga sanadka labaad, iyo marar badan oo keliya saddexaad.
Hababka taranta taranka Muscari
Kiniiniga dareenka ah ee muruqyada waa hab laguugu beddelayo nalalka dhalinyarada ee lagu sameeyay waalidka. Kala saarida ilmaha yar waa ay fududahay. Haddii guluubku aad u yaryahay, waxaa lagu beeray adoo adeegsanaya sariirta beerta razvodochnogo, dhammaan nalalka kale waxaa lagu beeray isla markiiba si meel joogto ah.
Muscari - ubax yaryar, waxaa lagu beeray dayaxa sii kordhaya dhammaadkii Agoosto ama horraantii Sebtembar. Marka la eego suurtagalnimada in la beero ama lagu beddelo baska adayga guga, waxaa habboon in la yiraahdo, guud ahaan, tan waa inaan la sameyn. Ka reeban waa xaaladda muskariiska ee dheryaha ubaxa yaraaday ka dib fasaxyada guga. Si geedka ma u dhinteen, waxaa si taxadar leh looga saari karaa dheriga, kala saar guluubka iyo dhirta dhul furan nasasho. Xilliga dayrta, guluubka noocan oo kale ah ayaa la qodi karaa waxaana loo isticmaali karaa sanadka soo socda si kor loogu qaado dheriga. Nalalka Muscari qoday dhulka waa in isla markiiba lagu beeraa. Haddii nalalka lagu iibsado dukaanka, ka hor intaan la beeri, waa in si fiican loo kormeero loona tuuraa nalalka jirran, bukaanka ama cayayaanka: maaddooyinka caafimaadka leh waa in la beeraa.
Nalalka Muscari waxaa lagu beeray mid gooni ah, laakiin waa mid caadi ah, aan lahayn god dheer (saddex jeer oo qoto dheer ka sarreeya nalalka). Si loo abuuro sariir sajisan ubax, waxaa lagula talinayaa in lagu beero dhirta qiiqa badan ee hal daloolka - tusaale ahaan, muscari, daffodils, xakamaynta, iwm. Waxay u egtahay mid aad u fiican, laakiin marka beerto waa in maskaxda lagu hayaa in nalalka kala duwan u baahan yahay qoto dheer. Sidaa daraadeed, soo degitaanka waxaa lagu sameeyaa qaab nambar jilicsan: nalalka ubaxyada waaweyn (sida daffodils) ayaa la dhigaa qoto dheer, ka dibna lagu rusheeyaa dhulka, nalalka muruqyada ayaa lagu dhajiyaa sare, iwm.
Nalalka muruqyada lagu beeray xilliga dayrta ayaa durbadiiba ku jira ubaxyada soo socda.
Sida loo daryeelo warshadda Muscari
Tan iyo markii muscari si fiican u dareemo sida ubaxyada duurjoogta ah ee qaybo kala duwan oo adduunka ka mid ah, iyaga oo keli ah ma aha oo kaliya geedi socod adag, laakiin waxaa laga yaabo in aan la fulin dhammaantiis: midabka jiirka ayaa awood u leh in uu hor istaago jiilaalka, ubaxyada iyo tarbiyo isaga oo aan taageero badan. Laakiin, sida kiis kasta oo dhirta, maqnaanshaha iyo daryeelka ayaa dhirta ka dhigta mid aad u qurux badan, caafimaad badan oo sii wata.
Ka waraabinta musqulaha
Muscari waxay u baahan tahay badeecooyin badan oo qoyaan ah xilliga koritaanka firfircoon iyo ubax. Si kastaba ha ahaatee, tani waa guga hore, dhulku waqtigan ma aha mid qalalan, sababtoo ah dhirta gebi ahaanba waxay ku jirtaa ciidda ka dib dhalaalka barafka iyo roobka. Waxaa haboon in la waraabiyo muscari waqtigan oo keliya haddii jiilaalka uu ahaa mid aan lahayn baraf iyo guga waa dabaysha oo aan roob lahayn.
Waa muhiim! Haddii biyuhu istaagaan dhulka, nalalka naasaha ayaa kareemaya.
Laba todobaad ka dib markii muruqyada ubaxu si tartiib ah loo yareeyo, ka dib caleemaha gebi ahaanba jaalaha ah oo loola jeedo, waxay joojineysaa gebi ahaan, sababtoo ah inta lagu jiro xilliga nasashada dhirta ficil ahaan uma baahna qoyaan.
Ahaanshaha ubax dilka ah, dhowr xilli, Muscari wuxuu abuuraa qoto dheer oo udgoon. Si dhirta loo horumariyo oo aan u dhexgalin deriskeeda, qoysaska noocaas ah waxay u baahan yihiin in ay khafiifiyaan saddexdii sanaba mar. Nidaamkan waxaa lagu daraa beeritaanka nalalka dhalinyarada ah meelo cusub, sidaas darteed waa in la sameeyaa laga bilaabo Agoosto ilaa Sebtembar.
Muscari waxay u dulqaadaneysaa transplanting isla markiiba ka dib iyo xitaa inta lagu jiro ubax, laakiin kiiskan, guluubka waa in lagu qodaa meel wanaagsan oo dhul ah, si aanay u waxyeeleynin oo aan u qaadan nalka iyo xididdada.
Bacriminta iyo nafaqada dhirta
Guga bacrimiga ee hooseeya ee musqulaha waa in la quudiyo organic. Haddii aad tan sameyso xilliga dayrta ee isla xilliga qodaya aagga, dahabka jilibka waxaa lagu kori karaa hal meel ilaa 10 sano, halka xilliga caadiga ah ee wakhtigaas la goosanayo guluubka moosku uu yahay shan sano.
Waa muhiim! Laguma talinayo in la isticmaalo bacrimin ee xayawaanka (digada cusub, digada digaagga, iwm.) Ee musqulaha. Isticmaalkooda waxay wax ka geystaan ​​cilladda nalalka iyo horumarinta cudurrada.
Ka dib markii ubax, jaraan caws, ciidda waa in la bacrimiyey leh xeryahooda potassium-fosfooraska. Xilliga dayrta, haddii dhirta aan gaarin da'da loogu tallaalay, goobta waa in la nadiifiyaa caleemaha yellowed, ka dibna mulched peat jiilaalka. Marka lagu daro waraabinta habboon iyo bacriminta, daryeeliinta muscari waxay sidoo kale u baahan tahay dabacsanaan iyo jaridda dhirta, maxaa yeelay cagaarshadu waxay si xun u saameyn kartaa habka nalalka samaynta.
Kaydinta nalalka muuska
Sida lagu sheegay, musqulaha qoday basasha waxaa badanaa lagu beeray meel cusub isla markiiba. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira xaalado marka ay lagama maarmaan tahay in la badbaadiyo nalalka qoday ilaa xilli xiga. Si guluubtu u habboonaato beeritaanka ka dib kaydinta, waa lagama maarmaan in la doorto caafimaad ahaan iyo sida ugu badan ee suurtogalka ah (ugu yaraan 1 cm dhexroor) tijaabada.
Qalbadda nalalka waa in lagu xalliyaa qiyaasta oo lagu dhaqo, ka dibna lagu daaweeyaa wakiilka antifungal. Ujeeddooyinkan, fangasab kasta (xalka dareeraha kalluunka, dareeraha Bordeaux, Fitosporin, iwm.) Waxay noqon doontaa mid ku habboon. Nalalka lagu iibsado dukaanka uma baahna in la farsameeyo; waa ku filan iyaga si loo hubiyo in shuruudaha kaydinta lagu muujiyo xirmada.
Nalalka la qallajiyey waa in la qalajiyaa 2-3 maalmood heerkulka qolka, ka dibna la dhigo isku dhaf ah peat ama qoyan nadiif ah;
Ku rid maaddada loo diyaariyey kaydinta meel mugdi ah, oo si fiican u hawo leh heerkul deggan (17 - 18 ° S) iyo qoyaan (qiyaastii 70%).
Inta lagu jiro muddada kaydinta, waxaa lagama maarmaan ah in si joogta ah loo baaro basasha si joogta ah loo nadiifiyo ama la gooyey. Nuqullada noocan ah waxay ku xiran yihiin in si degdeg ah looga saaro
Waa in la xuso mar kale in muscari si dhif ah looga tago kaydinta nalalka, taniyo waqtiga ugu wanaagsan ee lagu beeri karo xilliga dayrta, waana xilliga dayrta in nalalka dhirta da'doodu tahay la qodo.
Cudurada iyo cayayaanka iyo ka hortagga
The cadowga ugu weyn ee Muscari waa fayruuska cuuryaaminta jaalaha ah, kaas oo sababa cudur cudur sida maasa. Waxay ku dhacdaa caleemaha, waxay hoos u dhigtaa fallaadhaha ubaxa iyo natiijada waxay sii yaraaneysaa koriinka garoobaha. Muscari ayaa sidoo kale ka soo jeeda maaskarada qajaarka caadiga ah, taas oo sidoo kale deforms caleemaha.
Cudurka labada cudur ee labaduba waa aphid, sidaa daraadeed tallaabooyinka ka hortagga waa in looga danleeyaa in lala dagaallamo cayayaankan. Nidaam wanaagsan ayaa ah xalka saabuun kasta, kaas oo lagu buufiyo meelaha la isku buufiyo.
Geedaha lagu qaado maskaxda looma daaweyn karo, waa in isla markiiba la qodo oo la burburiyaa iyadoon loo nixin, maadaama cudurka uu si fudud ugu faafi karo dhirta deriska ah.
Cayayaanka kale ee culus ee musqulaha waa caarada caarada Si loola dagaallamo si waxtar leh diyaarinta "Fitoverm", "Acrofit" iyo "Vertimek".
Ugu dambeyn, muscari waa raaxo jecel ee jiirka, ka sarreeya oo dhan, jiirka Si aad u ilaaliso sariirta ubaxkan karbaashan, waxaad isticmaali kartaa dib u celinta dhirta, urta jilciyeyaasha aan u dulqaadan. Tani waxay noqon kartaa toonta caadiga ah ama muraayadda imperial (kan dambe wuxuu u muuqdaa mid soo jiidasho leh, sidaas darteed wuxuu si buuxda u buuxin doonaa ubaxa). Dhirta xayawaanku waxay sidoo kale cabsiin karaan jiirarka, tusaale ahaan, duurjoogta.
Guud ahaan, daryeelka Muscari wuxuu soo bandhigayaa dhibaato gaar ah. Way fududahay in la koro in qof kasta oo bilowga ah uu qaban karo hawshan. Oo hadday noqoto wakhti ka dib, geedka ayaa bilaabay inuu lumiyo muuqaalkiisa iyo tayada ubaxa, waxaa loola jeedaa in ay tahay waqti uun in la soo celiyo.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Dhuxul 2019